मनकामना केबुलकारको टिकट मोवाइलबाट किन्न सकिने | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मनकामना केबुलकारको टिकट मोवाइलबाट किन्न सकिने
Published On : १४ आश्विन २०७७, बुधबार १८:२१
कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनसँगै बन्द रहेको मनकामना केवुलकारले अब इटिकट पनि सुरु गर्ने भएको छ। सरकारले मठ मन्दीर खुला नगर्दा मनकामना केबुलकार पनि अहिले बन्द छ।
केवुलकारको सेवा पुन: सुचारु हुँदा नगद रहित कारोबार सुरु गरिने संचालक राजेशबाबु श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार अब केवुलकारको टिकट काट्न लामो लाइन बसिरहनु पर्दैन। इसेवा एपबाट मनकामना दर्शनको टिकट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले बताए। केबुलकार टिकट खरिद गर्दा नगदको सट्टा फोन पे बाट पनि भुक्तान गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको उनले बताए।
केबुलकार बन्द रहँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयसमेत प्रभावित रहेका छन्। मनकामना दर्शन गर्नका लागि मात्र नभइ स्थानीयले यातायताको रुपमा समेत केबलकार प्रयोग गर्दै आएका थिए। ७ महिनादेखि केबलकार बन्द रहेको छ। होटल रेष्टुरेन्ट खुले पनि केबलकार बन्द हुँदा मर्कामा परेको त्यहाँका ब्यवसायीको गुनासो छ।